गोरखाको रुई गाउँ जब चीनको भयो ! - NepalTale
गोरखाको रुई गाउँ जब चीनको भयो !
नेपाल टेल	प्रकाशित मिति: बुधबार, आषाढ १०, २०७७ समय: १८:५२:१३
उत्तरी गोरखाको रुई गाउँ नेपालको हो। तर रुई गाउँ ६० वर्ष देखि चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको अधीनमा छ।
‘गोरखा जिल्लाको रुई गाउँ नेपालको थियो, खोइ कसरी हो चीनप्रशासित तिब्बतको अधीनमा पुग्यो।’ एक स्थानिउले बताए । ७२ घर भएका रुई गाउँ सरकारी हेलचेक्र्याइँका कारण २०१७ देखि चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको अधीनमा रहेको जनाइएको छ । नेपालको सरकारी अधिकारीहरु ‘प्रलोभनमा परेर’ सीमा स्तम्भ सार्न अनुमति दिए पनि नेपालको नक्सामा यो समेटिएकै छ।
पराईको शासन खप्न नसक्ने स्थानीय त्यहाँबाट भागेर साम्दोमा आई बसे। उनीहरूले ६० वर्षसम्म आफ्नो थातथलो बिर्सिएका छैनन्। त्यसो त रुईवासी पनि समय–समयमा यता आउँछन्, साम्दोवासी पनि रुईतिर गइरहन्छन्। साम्दोका बासिन्दा रुईभन्दा दुई दिन टाढा पर्ने खाङ्सार बजारसम्म सामान किन्न पुग्छन्। त्यताका बासिन्दा पनि साम्दो, सामा गाउँ, ल्हो, प्रोक, बिहीसम्म सामान बेच्दै आइपुग्छन्। दुवै गाउँका बासिन्दासँग सीमा वारपार गर्ने पुर्जी हुने साम्दोका बेलबहादुर गुरुङ बताउँछन्।
उनका अनुसार रुईको जमिन असाध्यै उर्वर छ। त्यसकारण पनि साम्दोवासीले रुई मन पराउँछन्। ‘त्यहाँ सबैभन्दा ठूलो एउटा गुम्बा छ। फा तेगा गुम्बालाई बाउ गुम्बा भन्छन्। ल्होको बुनाक्छा गुम्बालाई छोरा गुम्बा भन्छन् र बिहीको मामानिखाङ गुम्बालाई आमा गुम्बा भन्छन्’, उनी भन्छन्, ‘डोल्पा, मुस्ताङ, मनाङदेखिका लामा गुरुहरू त्यहाँ अध्ययन गर्न आउँछन्। सबैभन्दा ठूलो अध्ययन केन्द्रजस्तै हो त्यो गुम्बा तर नेपालले गुमायो।’ रुई भोटभित्र चारवटा टोल छन्। सबैमा गरेर १ सय ७० घरधुरी रहेको उनी सुनाउँछन्।